Daynta SMS lagu qaato oo la damacsan yahey in la adkeeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mobayl lagu dalbanayao daynta SMS. sawir: Sawirle: Stefan Gustavsson / SvD / TT
Daynta SMS lagu qaato oo la damacsan yahey in la adkeeyo
Qorshe cusub oo looga hortegeyo daymaha SMS-ka
La cusbooneeyay måndag 5 september 2016 kl 14.26
La daabacay måndag 5 september 2016 kl 12.31
Xaaladda maanta lagu jiro ayey qiyaastii 5-7 boqolkii dadyoowga daymmaha ku qaata dhambaalka SMS, waxa loo yaqaanno daymaha degdegga laga diiwaan geliyaa hayadda Kronofogden ee khasabka deeymaha ku soo celisa, sida ku cad baaritaan uu sameeyay baaraha dawladda mar uu u warramayay laanta wararka ee Ekot.
Per Nordkvist oo ka howl-gala hayadda dhaqaalaha ayaa sheegay inuu aad uga walaac-san yahay xaaladda maanta sida ay tahay.
– Waxaa muuqatay iney kor u kaceen dalabaadyada soo gaara hayadda Kronofogden ee deeymaha khasabka ku soo celiya. Macaamiisha ayey la soo gudboonaadaan xaalad adag oo aaney ka bixi karin iyo iney ku harqamaan daymo aaney iska bixin karin, kuwaasina oo saameeyn ku yeesha nolosha macmiilka iyo qoyskaba, sida uu sheegay Per Nordkvist.
Marar badan ayaa laga doodey deeymaha loo qaato guryaha oo mar walba marka ka dambeeysa kor u sii kacaysa, halka dhanka kale daymo loo qaato alaabooyinka guryaha la dhigto, qalabka teknikada ama gaari cusub iyada oo aan dammaanad loo dhigan guri mulki loo leeyahay. Sannadkii ina dhaafay oo keliya ayey kor u kaceen daymaha bulshada lagu leeyahey 8% sannad gudihii, Iyadoona daymaha lagu leeyahey guud ahaan bulshada Sweden ay caga-cageeynayso 3 500 bilyan oo koronka iswiidhishka ah.
Per Nordkvist, ahna madax-waaxeed ka howl-gala hayadda kor-meerka dhaqaalaha ayaa sheegay in hayaddiisu baaris ugu jirto sidii wax looga ogaan lahaa daymaha bulshada lagu leeyahey.
– Caqabad ayaannu u argnaa daymaha faraha badan ee bulshadu qaadato ama lagu leeyahey, sida uu sheegay Per Nordkvist.
Qodob ka mid ah ayaa ah daymaha lagu qaato dhambaalka SMS, waxa loo yaqaanno SMS-lån ama snabblån. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha daymahaa bixiya ayaa ka qaata ribo aad u sarreeysa iyo adeeg dheeri ah oo kor u dhaafaya 30% daynta la qaatay.
Daymahaasina oo ku noqda dadyoowga qaata debin aaney ka bixi karin. Halka bisha oktoobar ee foodda innagu soo haysa la soo ban-dhigi doono qorshe lagu hagaajineyo xuquuqda macaamiishaa. Tusaale ahaan:
In la xaddido ribada ay khasabka tahay in daynluhu bixiyo.
In aannu dayn-bxiyuhu xaq u lahayn in lacagta loo soo celiyo haddii aannu baaritaan dhab ah ku sameeyn shakhsiga daynta qaadanaya dhaqaalihiisa inta aan daynta la siin.
In daynta la qaato aanay ka badnaan dib u celinteeda ugu badnaan laba jibbaar. Haddii uu shakhsigu daynsado 1 000 koron aan laga qaadi karin wax ka badan 2 000 oo koron.
Baaraha daaymaha lagu qaato dhambaalka SMS Johan Löfstrand, ahna ku xigaha guddi-hoosaadka baarlamanka ee arrimmaha bulshada, kana tir-san xisbiga Socialdemokraterna (S), ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin adadag ee amuurtaa laga qaado.
– Qayb ka mid ah tallaabooyinka ay dawladdu soo jeedisay ayaa ah kuwo adadag, hase yeeshee kolka aan qiimeeyo xaaladda maanta waxaa dhici karta in loo baahan yahay sidii loogu tallaab-san lahaa tallaabooyin ka sii adadag, sida uu sheegay Johan Löfstrand.
Deymaha sms-ka oo la soo jeediyey in la xakameeyo